Xiaomi Mi Mubhedha weMubhedha 2, kuongororwa nemutengo uye maficha | Gadget Nhau
Xiaomi Mi Mubhedha weMubhedha 2, kuongororwa nemutengo uye maficha
Miguel Hernandez | 28/08/2021 15:00 | General, Reviews
Zvigadzirwa zvemumba zvakabatana zveXiaomi zvave kunyanya kufarirwa nekuda kwehukama hwavo hwepedyo pakati pehunhu nemutengo, chiratidzo chechiratidzo muzvikamu zvacho zvese. Kana zviri zvekuvhenekera zvine hungwaru, hazvigone kuve zvishoma, uye panguva ino tinokuunzira chimwe chezvigadzirwa zvacho zvinozivikanwa.
Isu tinotarisa kuXiaomi Mi Bedside Lamp 2, mwenje unoshanda zvakasiyana unoenderana zvakanyanya neakasiyana vabatsiri. The Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 yatove patafura yekuongorora uye isu tichakuudza izvo chiitiko chedu chave chiri neichi chishamiso uye chakazara chigadzirwa.
2.1 Kubatanidzwa neAmazon Alexa
2.2 Kubatanidzwa neApple HomeKit
3 Zvirongwa uye zvinoshanda
Chizvarwa chechipiri Xiaomi Mi Bedside Lamp ine yakasarudzika maindasitiri dhizaini uye zviri nyore kuchinjika kune chero chero nzvimbo. Iyo ine urefu hwemasentimita makumi maviri uye hupamhi hwemasendimita gumi nemana, dhizaini uye isina kureruka dhizaini inovimbisa kuti inogona kupa kuvhenekera mune 20-degree spectrum. Simba rekubatanidza nderechikamu chekumashure uye nechemberi chikamu chinosarudza chine mabhatani matatu. Iwe unayo pamutengo wakanakisa paAmazon kana iwe uchifarira kuitenga.
Matt chena mapurasitiki echitsiko uye machena machena enharaunda inotarisira kupenya mwenje. Chigadzirwa chacho chiri nyore "kukwana" mumakamuri akasiyana, saka hatifanire kunamatira kukushandisa kwaro setafura yemubhedha.
Senguva dzose, chigadzirwa chinouya neyakareruka-yekumisikidza yekumisikidza bhuku. Chekutanga pane zvese isu tave kuzobatanidza magetsi uye isu toenderera nekuvhara iyo Mi Bedside Lamp 2 kune yemagetsi magetsi. Otomatiki, pasina kukosha kwezve zviito, tichaenda kunoshanda neiyo Xiaomi Mi Kumba kunyorera, inowanika kuApple neIOS.
Kana tangopinda muakaundi yedu yeXiaomi, kana isu takanyoresa (zvakanyatso kudikanwa) kuitira kana tisina account, tave kuda kubaya "+" bhatani kumusoro kurudyi kwescreen. Mune mashoma masekondi chete Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 yatichangotanga ichaonekwa.
Isu tinongofanirwa kukupa iwe network yeWiFi uye password yako. Isu tinonyevera panguva ino kuti iyo Mi Bedside Lamp 2 haienderane nemasaiti e5 GHz.Ipapo tichawedzera kamuri mukati memba medu pamwe nekuzivikanwa muchimiro chezita. Panguva ino isu tine iyo Mi Bedside Lamp 2 inoda kubatanidzwa, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu tinowirirana zvizere neAmazon Alexa neGoogle Imba, saka tichaenda kupedzisa kubatanidza mwenje nevatinoda vedu chaivo vabatsiri.
Kubatanidzwa neAmazon Alexa
Isu tinoenda ku "Mbiri" mukona yepazasi kurudyi, tobva taenderera mberi mu "izwi masevhisi" kurongedza uye sarudza Amazon Alexa, ipapo isu tichawana matanho, ayo anotevera:
Pinda yako Alexa application uye enda kuchikamu chehunyanzvi
Dhawunirodha hunyanzvi hweImba yeXiaomi uye pinda neakaundi imwechete iyo yawakabatana neXiaomi Bedside Lamp 2
Dzvanya pa «tsvaga zvishandiso»
Yako Xiaomi Mi Yepamberi pemwenje Mwenje unotooneka mune ye «mwenje» chikamu kuti iwe ugone kugadzirisa zvaunoda
Kubatanidzwa neApple HomeKit
Parizvino rairo iri nyore kutevedzera pane iyo yatakapa yekubatanidza neAmazon Alexa.
Paunenge uchinge wapedza yese chikamu chekumisikidza kuburikidza neXiaomi Imba enda kune Apple Kumba kunyorera.
Dzvanya pa icon "+" kuwedzera mudziyo
Skena iyo QR kodhi pasi pechigadziko chemwenje
Inozowedzerwa otomatiki kune yako Apple HomeKit system
Izvi, pamwe chete nekuenderana neGoogle Imba, zvinoita kuti Mi Bedside Lamp 2 ive yeakanakisa kukosha kwezvigadzirwa zvemari pamusika pakati pemarambi akangwara.
Zvirongwa uye zvinoshanda
Zvinopera pasina kutaura kuti nekuda kwekubatanidzwa pamwe neakasiyana Apple neAmazon vabatsiri, iwe unozokwanisa kuita otomatiki yeawa kana chero imwe mhando yekugadzirisa otomatiki iwe yaunoda. Mukuwedzera kune zvakataurwa pamusoro apa, tine Xiaomi Home application iyo, pakati pezvimwe zvinhu, ichatibvumira ku:
Chinja mwenje werambi
Ruramisa hue yevachena
Gadzira kuyerera kwemavara
Batidza rambi uye kudzima
Zvisinei, panguva ino isu tinofanirwa zvakare kutarisa pane izvo zvisinganyanye kukosha zvinyorwa zvemanyore, Nekuti kutendeseka, kuve mwenje wepatafura yemubhedha zvakanaka kuti isu tine zvakawanda zvingasarudzwa munhare mbozha, asi kumwe kwekushandisa kwaro kuri pachena pasina mubvunzo kuchazogadziriswa nemaoko.
Kune izvi isu tine yekubata sisitimu iri pakati ine mwenje we LED uye inotipa zvese izvi mikana:
Bhatani repazasi rinozoita basa rekubatidza mwenje uye kudzima mune chero mamiriro ezvinhu nekubata kamwe chete.
Iyo inotsvedza munzvimbo yepakati ichatibvumidza kuti tigadzirise huwandu hwekupenya kunoenderana nezvatinoda uye izvo zvinopa mhinduro yakanaka.
Bhatani riri kumusoro rinotibvumidza isu kugadzirisa machira uye mavara:
Kana iri kupa chena chena, kugadzira ipfupi kubata kuchatibvumidza isu kusiyanisa akasiyana shades eeruvara ayo atinopihwa kwatiri kubva kuchitonhora kusvika kudziya
Kana isu tikadzvanya kwenguva refu isu tinokwanisa kuchinjanisa pakati pechena modhi uye iyo RGB color modhi
Kana iri kupa iyo RGB color modhi, ipfupi bhatani pane bhatani riri kumusoro rinotibvumidza isu kusiyanisa pakati pemarudzi akasiyana
Iyi Xiaomi Mi Yemubhedha Rambi 2 inoshandisa 1,4 watts pazororo uye 9,3 watts mukushanda kukuru, saka tinogona kuzviona "zvakaderera kushandisa". Kana zviri zvekugona kwechiedza, isu tinowana zvimwe zvakaringana (uye zvakawanda) 400 lumens yerambi remubhedha.
Maonero angu ekupedzisira nezve Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 ndeyekuti ndinoona zvakaoma kupa zvimwe zve chigadzirwa chaunogona kutenga pakati pe20 kusvika 35 euros zvichienderana nenzvimbo yekutengesa uye izvo chaizvo zvinopihwa. Tine mwenje unoshanda zvakasiyana-siyana, unowirirana kwazvo uye nehunhu hwaungatarisira kubva pazviri, zvinonetsa kupembedza kusava neyako mune imwe imba yakabatana.
Mi Rutivi Rwebhedha Rambi 2
Kudzokorora kwe: Miguel Hernandez Gutierrez
Yakatumirwa pa: 28 August 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 28 August 2021
Inoda kugadzira Xiaomi account
Musiyano wemutengo panzvimbo dzekutengesa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Xiaomi Mi Mubhedha weMubhedha 2, kuongororwa nemutengo uye maficha
Jabra inogadziridza chigadzirwa chayo nemhando nhatu dzeElite dzakateedzana
ILIFE H70, iyo isina tambo yekuchenesa yawaitsvaga